A manicure omuhle - okuyisici esibalulekile ingaphandle intokazi yesimanje uzilungise.
Wonke umuntu wesifazane ithole kulesi sici yayo, kuba indlela elungile kuphela. Ezinye izintokazi ukusebenzisa abaculi professional, abanye bathole izinto ezidingekayo futhi uzenza manicure. Yiqiniso, zonke fashionista uyazi Essie varnishes okungenani emaphaketheni koqobo.
Kanjani umkhiqizo Essie
Indalo yakhe uphawu owaziwa ubophekile owesifazane okunenjongo ngubani wasungula ibhizinisi ngezandla zabo. Okuningi ku 1981 Essie WEINGARTEN waziphatha ukudayiswa nail 12 imibala izipikili. Futhi, kwaba khona ahlukahlukene 3 uhlelo lokunakekela nail. Wayekugwema ubuhle New York, ukhuluma ngezinzuzo amathuluzi inikeza.
Umlando okwengeziwe yentuthuko inkampani kwamiswa kanje:
ukubukeka Special ibhodlela yadalwa ngo-1993. Lokho owaqalwa lokugoqa abesifazane amakhasimende neyaziwayo Essie varnishes.
Ngo-2000, kwi ibhodlela livela umdali brand name. Ngaphambi kwalokhu, izimali for ukunakekelwa izinzipho ekhiqizwa emaphaketheni ngaphandle amagama brand.
2004 kwaphawula ukunwetshwa ukukhiqizwa, ukuvela Amaqoqo amasha upende, kanye imikhiqizo ukunakekelwa kwamazipho nezinye izinsimbi.
2010 - Le nkampani yathengwa yi-izimonyo umkhakha imidondoshiya ezifana L'Oreal.
Kuyinto ngenxa isikwele esigabeni cross kanye mpo ibhodlela ilebula negama imikhiqizo brand yenkampani amakhasimende ukukhumbula.
Kungani amakhasimende abesifazane uthanda Essie
Lucky inkampani baziwa amagama abo engavamile, bakwazi iholele ukuba izinhliziyo amantombazane amaningi ahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, abalandeli sha njalo bayahlonishwa inqwaba imibala ehlukene. abesifazane abaningi bamane ukwazi ngalezi imibala. kanjani ukubheka, isibonelo, ka Essie varnishes nge amagama alandelayo:
"Ukuvuma we Shopaholic."
Mayelana udumo izinga imikhiqizo kufakazelwa iqiniso lokuthi okunenjongo Essi Vayngarten eyake yaba ekhelini yencwadi Buckingham Palace. Icacisa isicelo ukuthumela Queen a ukuvenisha ngokuthi "Ballet Shoes". Kodwa Camilla Parker Bowles emcimbini lomshado uncamela umthunzi "Waltz". Keyt Middlton wakhetha umthunzi "Allure".
Inzuzo undoubted iyona ezihlukahlukene imibala namagama angavamile. Amagama kusho umsindo ongajwayelekile ngakho futhi kukhanga abesifazane, okuyinto isiqinisekiso funa kuhle Essie varnishes.
Izinzuzo nail sula Essie:
Kusho amelana igawula.
Zingakapheli izinsuku eziyi-7 luthi alufane akusho inqamuke.
Ukukhethwa ocebile imibala.
sipho Standard kusukela inkampani - ezihlukile mayelana 300. Amaklayenti bathi dazzled at the emehlweni palette Essie imikhiqizo. Nail Izibuyekezo sula lapho ikakhulukazi omuhle futhi iklayenti ungomunye wabesifazane edume kakhulu emhlabeni, yebo, kudingeka siyinake. Ngaphezu kwalokho, unyaka ngamunye kukhona nezethulo eyodwa noma ngaphezulu amaqoqo.
Okokuqala varnishes brand baziswa ochwepheshe. manje imikhiqizo yabo ajabulela impumelelo enkulu ngokushumayeza. Umthamo amabhodlela abendlu futhi ukusetshenziswa professional kuhluke bodwa. Kancane kancane, kwavela funa varnishes nokusetshenziswa ekhaya. Ngemva Essie imikhiqizo kungatholakala ngisho khona kanye Madonna.
Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela ukuze isetshenziswe beauty salon, kodwa futhi ukwakha manicure ekhaya Kungcono kakhulu Essie nail sula. Izibuyekezo esibonisa ukuthi abesifazane musa njalo uvakashele salon, uma ufuna ukupenda izinzipho zakho ngomsebenzi noma ucwaningo. Ngakho-ke, lacquer, okuyinto isikhathi eside azigcina ngayo kuqala emva isicelo, - lesi isixazululo eliphezulu abesifazane abaningi.
"Ukukhuluma amazinyo": incazelo ye-phraseology kanye nezibonelo zokusetshenziswa
Amahhotela eshibhile Irkutsk: ukukala, incazelo, inombolo kanye nokubuyekeza
Pekka Rinne: umsebenzi kanye nokusebenza siqu